Huanglong, ọdọ mmiri ndị nwere ọtụtụ okpukpu na Ihe Nketa Worldwa | Akụkọ Njem
Huanglong, ọdọ mmiri dị iche iche na World Heritage
Mariela Carril | | China, Ihe ị ga-ahụ
China nwere ọtụtụ saịtị UNESCO kwupụtara Ihe Nketa Worldwa otu n’ime ha bụ nke ị na-ahụ na foto a: ebe mara mma ma dịkwa ebube ogologo ogologo. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmata China ma gafee Beijing, Shanghay na Hong Kong mgbe ahụ nzọ ụkwụ gị kwesịrị ịbuga gị Sichuan.
Ọ bụghị ebe dị mma ma ọ bụ ebe dị nso kama n'etiti njem na ala ndị ga-anabata gị mgbe ị rutere, obi abụọ adịghị ya na ọ ga-abụ nnukwu njem na ndụ gị. Ọ bụ Ebe Ihe Nketa Worldwa kemgbe 1992 na ị ga-ahụ ya n'onwe gị iji chọpụta ihe kpatara ya.
Huanglong Mere Ihe Akụkọ na Ebe Nleba Anya
Dị ka m kwuru n'elu dị na sichuan, n'ime ugwu Minshan, ihe dị ka kilomita 300 site na isi obodo Sichuan Chengdu, na kilomita 144 na ndịda Jiuzhaigou. N'aka nke ya, ọ bụ akụkụ nke Huanglong Scenic Reserve na ogige mba nke otu aha ahụ.
Foto ndị ahụ gosiri gị saịtị dị ka akụkọ sitere n’akụkọ ifo. Kpakpando bu ndagwurugwu, oku Ogologo odo odo, nke na-aga nanị ihe karịrị kilomita atọ na ọkara ma site n’ebe dị anya yiri dragon ọlaedo na-egbu egbu. Ma ọ bụ na e nwere carbonized ego, ọtụtụ oyi akwa, niile site na oke ohia na glaciers nke ndagwurugwu. Emeela ponds dị iche iche elu na e nwere ndị waterfalls na-ejikọ ha.
Isi njem nke ọdọ mmiri ọla edo na iyi mmiri na-amalite n'ụlọ nsọ Buddhist oge ochie nke dị elu na ndagwurugwu ma gwụ na ọdọ mmiri mara mma a na-akpọ Ọdọ Mmiri Onye ọbịa. Agba nke ebe a na-adị iche iche n’oge nke afọ kamakwa ọdịdị n’ihi na ọdọ mmiri ndị ahụ buru ibu ma ọ bụ pere mpe ma ọ bụ ọbụna nwee ndo dị iche n’etiti edo edo, aja aja, acha anụnụ anụnụ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dabere na ọ dị ọkụ ma ọ bụ oyi.
Ebum ala nke ebe a ka emeputara otutu oge. Ihe nkwụnye ego dị n'ime ala abanyela n'ime ala ma mepụta ihe ndị a ọdọ mmiri mmiri nkịtị nke omimi di omimi. Mmiri ahụ si n'otu gaa na nke ọzọ ma gwuo ọgba ndị dị na ndagwurugwu ahụ. E nwekwara ọnụ ọnụ n'akụkụ abụọ nke iyi ahụ na otu osimiri ahụ na-asọ n'etiti ọdọ mmiri ahụ ma na-aga n'ihu na-echetara ndị ọbịa ihe kpatara akpọrọ saịtị ahụ Quebrada del Dragon Amarillo.
N'aka nke ọzọ, akụkụ a nke China bụ ebe obibi nye ọtụtụ ụdị, n'etiti ha Nnukwu Panda na Enwe Ọlaedo. Ọ bụghị na ị ga-ahụ anụmanụ ndị a n'ezie mana ha bi ebe a na nke ahụ na-agbakwụnye uru na mbara ala. Ọ bụghị naanị banyere ọdọ mmiri, ebe nwere ọtụtụ saịtị mara mma: enwere otu Mmiri mmiri dị elu nke 14 mita, ọgba, dunes, ụlọ nsọ na ọtụtụ ọdọ mmiri mara mma na fancy aha. Ihe niile na-acha ọcha na-adịru mgbe ebighị ebi nke dị n'agbata mita 1700 na mita 5588 dị elu, glaciers gụnyere. Gburugburu ya nwere ihe dịka hekta 60.
Taa gọọmentị wuru a Walzọ ụkwụ ejiri osisi dị kilomita 4.2 na-aga n’alama ọ bụ travertine na nke ahụ na-enye ndị ọbịa ohere ịkele ya na ije ije elekere anọ. Ọzọkwa, n'oge dị elu, e nwere eriri.
Kedu ka ị ga-esi rute n'akụkụ a nke China? Ọma ị na-a ụgbọ oloko ma ọ bụ ụgbọ ala na Beijing iji kpọga gị Chengdu. Site na ọdụ Jiuzhaigou na obodo a ị na-agba ụgbọ ala na Huanglong National Park. Oge mbụ ụgbọ ala na-ebido bụ elekere asaa nke ụtụtụ, ọ na-ewe awa atọ na ọkara, wee laghachi n’obodo ahụ n’elekere 7, 3:3 nke abalị. Ọ dị oke mkpa ịlele usoro oge.
Enwekwara bọs ndị jikọtara Chengdu na ọdụ ụgbọ elu Huanglong ma ọ bụrụ na ịnweghị, ị ga-ewe taxi. Gbakọọ njem ahụ na elekere anọ site na Jiuzhaigou. Nwere ike ịdebanye aha maka a tour, nke kachasị ewu ewu bụ njem ụbọchị asaa nke gafere Jiuzhaigou na Chengdu ma na-agunyekarị njem njem na Songpan nke dị ihe dị ka 56 kilomita.
Banye na ogige ahụ na-efu ihe dị ka $ 30 kwa onye toro eto na nnukwu oge na obere, $ 10, na obere oge. Oge kachasị elu dị n'etiti Eprel 1 na Nọvemba 15 na ogige ahụ mepere site na 8 ruo 5 na mgbede. Oge kachasị mma iji gaa, nke kachasị dịkarịa ala, bụ June July na ike ọgwụgwụ, agbanyeghị ocher na agba ọla edo nke mgbụsị akwụkwọ mara mma n'ihi na a na-egosipụta ha n'ọtụtụ narị ọdọ mmiri ndị ahụ n'ụzọ pụrụ iche.
N'ụzọ doro anya, oge oyi nwekwara ọtụmọkpọ ya ebe ọ bụ na snow na-adị ebe niile belụsọ na ọdọ mmiri mmiri ọkụ ka ị nwee ike were ụdị egwu ahụ. Ewezuga ebe ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ, ọ bụ ịse foto kacha mma. Dị ka ị nwere ike iche, ọnwa kachasị ekpo ọkụ bụ July na August, n'oge nke okpomọkụ dị gburugburu 16ºC. Ọ bụrụ n ’ịga site na Disemba ruo Febụwarị ọnọdụ okpomọkụ bụ 1ºC ma ọ bụ obere. Udu mmiri si na Mee rue Ọgọstụ, ebe a ụtụtụ na ehihe na-abụ ụgụrụ. Cheta na obu ndagwurugwu na nke ahu okpomọkụ na-adị iche mgbe niile.
Mgbe ị na-eme atụmatụ nleta ahụ, gbalịa ịhazi ihe niile iji bido n'isi ụtụtụ n'ihi na ogige ga-ewe gị ụbọchị niile. Zọ ụkwụ ahụ m kwuru na mbụ na-agba ọsọ 4 kilomita site na mgbe ahụ ị nwere ike were ụzọ ụgbọ ala mee ntụgharị. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ibubata nri, akpụkpọ ụkwụ dị mma, mmiri na ihe na-egbochi mmiri ozuzo. E nwere mpaghara nke ụlọ ahịa na ime ụlọ ịwụ ahụ, ọ dabara nke ọma, mana ị kwesịrị iweta nke gị iji zere ịkwụ ụgwọ karịa na, akwụkwọ mposi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Ihe ị ga-ahụ » Huanglong, ọdọ mmiri dị iche iche na World Heritage
Mee atụmatụ njem dị ukwuu na Malta
Katidral nke Justo na Mejorada del Campo, Akụ nke Mmasị Omenala?